Mark Zuckerberg na-adabere ná Bitcoin aka decentralize Facebook
The technology powering bitcoin nwere ike nyere aka melite Facebook n'ọdịnihu, Mark Zuckerberg kwuru.
Dị ka akụkụ nke a nkwa na-enyere idozi saịtị n'elu 2018, ya guzobere kwuru na ọ ga-ele anya n'ime na ojiji nke nkà na ụzụ ọhụrụ na-akwụsị ịbụ nnọọ centralized.
Otu n'ime ndị na teknụzụ na-Bitcoin, ọ si.
“A ọtụtụ n'ime anyị nwetara n'ime technology n'ihi na anyị kwere na ọ pụrụ ịbụ a decentralizing ike na-ewepụta ihe ike na ndị mmadụ aka. (Anọ mbụ okwu nke Facebook ozi mgbe nile “enye ndị mmadụ ike”.) Back na 1990s na 2000s, ọtụtụ ndị mmadụ kweere technology ga-a decentralizing ike,” o dere na a ogologo post.
“ma taa,…ọtụtụ ndị ugbu a, kwere technology naanị centralizes ike kama decentralizes ya.”
“E nwere mkpa counter-na ọnọdụ a - ka izo ya ezo na cryptocurrency - na-ike site centralized usoro na-etinye ya azụ n'ime ndị mmadụ aka. Ma ha na-abịa na ihe ize ndụ nke ịbụ ike ịchịkwa. M nwere mmasị na-aga miri na-amụ mma na-adịghị mma akụkụ nke teknụzụ ndị a, na otú kacha mma iji ha na ọrụ anyị,” o dere.
Bank of England nwere dịghị atụmatụ ẹkedori cryptocurrency
The Bank of England emewo ama esịn atụmatụ ẹkedori ya digital ego gburugburu nchegbu banyere ya mmetụta na ego usoro.
The U.K. si akụ etiti gwara FTAdviser na o nwere “dịghị ugbu a atụmatụ” ẹkedori ya cryptocurrency, ma ga-anọgide na-enyocha isiokwu.
The BoE gosiri na ọ ama esịn na atụmatụ n'elu nchegbu na ọha na eze nwere ike kwụsị iji azụmahịa akụ akụkọ na-aga ka BoE si digital ịkwụ ụgwọ usoro maka azụmahịa na zuo nke ibu. A uka akwaga BoE cryptocurrency pụrụ iduga azụmahịa mmiri na-agba ọsọ nke ego na-agbazinye, na-eme ka “ịgbā” na aku na uba, ya kwuru.
Leveraged Bitcoin ETF chọrọ ka sec
U.S. enweta ego oru na-eme atụmatụ na-ewu "leveraged" na "inverse" ego na-ebili – ma ọ bụ daa – ugboro abụọ dị ka ngwa ngwa dị ka price nke bitcoin na a nyere ụbọchị.
Direxion Asset Management LLC ezube depụta otú ahụ na ngwaahịa na Intercontinental Exchange Inc si NYSE Arca mgbanwe ọ bụrụ na U.S. ala regulators enye ikwe, dị ka a ịgba akwụkwọ site na mgbanwe a izu.
N'ihi ya, anya na U.S. Securities na Exchange Commission jụrụ ma ọ bụ na-etinye na jide niile na amụma.
Overstock enweta US $ 100m si George Soros Fund blockchain oru na ndị ọzọ
Overstock.com dị nnọọ wee a hefty mmaji nke mgbanwe site na otu nke nnukwu aha na ego, na CEO Patrick Byrne kwuru ọtụtụ ihe na ya ga-enweta ego ụlọ ọrụ blockchain ọrụ.
The ụlọ ọrụ mara na a Securities na Exchange Commission (sec) ịgba akwụkwọ n'izu a na njide nke a ikike ama gosipụtara ya nri ịzụta $100 nde uru nke mbak. Ọ bụ ezie na ịgba akwụkwọ adịghị mata nke a ọṅụ, Byrne gwara CoinDesk ọ bụ kwantum Fund, jisiri site Billionaire George Soros.
$524M zuru na ...
United agba nke Benetton amalite ịnakwere cryptocurrency na Lithuania
Ọzịza cryptocurr ...
Previous Post:Omume ndị kasị mkpa nke 2017 na kaadị Community
Next Post:Olee otú a ga ICO Market agbanwe 2018?